Ihu etemeete-BD-ime ihiere
Egbugbere ọnụ etemeete
Gosipụta ụlọ ọrụ
9 Agba ntụ ntụ Chapụta ime ihiere palette & ngwe ukpụhọde Board, Side Face contouring ntụ ntụ Etemeete-adịgide adịgide Brightening Etemeete Ọbụna Skin ụda Trimming Cheek.
Nke mbụ ：Ezigbo Ntughari: Site n'iji agba agba agba isii na agba, agba, na imi, ị nwere ike ịmepụta ihe a kpụrụ akpụ, nyere gị aka gbanwee ezughị okè ihu ma gbakwunye ọdịdị ihu, ma tinye ihe na-egbuke egbuke na ụdị ọdịdị gị dị iche iche..
Ngwurugwu dị mfe iji gwakọta ya na ogologo oge nwere ike ịbụ nke dị nfe na apụl nke agba maka obere iwepụ, ma ọ bụ wulite ya iji nweta ihe ngosi dị egwu na nke na-acha odo odo.
Abụọ mbụ:Otú e si eji ya: Jiri ahịhịa ihu dị sachaa, hichaa ọla nchara na ntan, akụkụ imi na agba iji kpụgharịa akụkụ ahụ. Tinye nkedo na apụl na cheeks, ma jikọta ya elu ma chee ihu na ntị maka okike.
Mepụta ụdị okike site na iji satin metụ ya aka Ọ na-enye ọtụtụ peachy pink maka crisp anya
Gbakwunye agba agba nke agba na agba
Zuru oke maka ojiji kwa ụbọchị, mmemme pụrụ iche ma ọ bụ oge wdg na etemeete niile. Dịka ọkachamara, agbamakwụkwọ, etemeete oriri ma ọ bụ etemeete.
JOYO nwere ihe ịchọrọ iji mepụta ntọala ọ bụla, onyinyo anya, ahịhịa etemeete, ndị na-ezochi ihe na ndị na-agba agba iji mepụta ndụ mara mma.
Nke mbụ:Transparent makeup, light and silky, indulgent modern, play a very good ịchọ mma mgbanwe ọrụ, bụ ihe dị oké mkpa nhọrọ maka European na American hụrụ mma, ike a “sexy tozuru okè usoro” (obi ọjọọ-free omume mara mma).
Nke mbụ:Nkwakọ ngwaahịa - igbe kaadiboodu na-achaghị acha nwere agba agba itoolu, pan nke ọ bụla bụ 3.65 cm * 3.65 cm. Elu, dị mfe iji. Ezigbo mma maka iji ọkachamara mee ihe ma ọ bụ jiri ya kwa ụbọchị.
Nrọ - dị nro, dị nro ma jikọta ya nke ọma. Anti straipu na mgbochi fouling. Ọ dị mma maka ndị na-ese ihe etinyere na onye ọ bụla chọrọ ịnwale agba dị iche iche nke etemeete ntụ karịa itinye naanị ego iji zụta ntọala.
Njirimara - weta ihe okike na ahụike na-enwu gbaa na agba ọ bụla, nke a ga-eyi naanị ya ma ọ bụ kpuchie ya iji nwekwuo omimi na ike. Nye uzo, eke agba. Jiri uzo uhie iji zere mmetụta dị arọ.
Agba - usoro ọkachamara nke etemeete, ụdị agba 9 dị iche iche, ga-ahapụ gị pụọ na akpụkpọ ahụ gbara ọchịchịrị. Nke a na -eme ka elu-acha ihu igwe itoolu ntụ ntụ na-eme ka anụ dị nro ma na-enye ume ọhụrụ, eke na ahụike.
Adaba - zuru okè n'ihi na Party anam-elu / ukporo anam-elu / Wedding anam-elu, wdg Vodisa Ihu ime ihiere ga-enyere gị aka na-adọta ndị ọzọ na ndị ọzọ ma ọ bụ n'oge ndị ọzọ. A dịgasị iche iche nke agba n'ihi na ị na ịhọrọ.
Nke gara aga: Anya etemeete-BD15-DW
Osote: Ihu etemeete-BD-CH
Ihe kacha mma kacha mma
Ekwentị: + 86-755-21047959
Adreesị: 50lọ 501, Mba 279-6, Obodo Dabutou, Songyuansha Community, Guanhu Street, Longhua District
JOYO © Ikike niile echekwabara. Featured ngwaahịa, Sitemap, Obere lipstick, Matte Eyeshadow Palette, Anya Anya ọla edo, Kacha mma ude Eyeshadow, Ihe kacha mma, Shimmer Lipstick, Ngwa niile